Sifuna ukuhamba ibanga elide kwiChampions League: Billiat - Impempe
Sifuna ukuhamba ibanga elide kwiChampions League: Billiat
Unethemba lokuthi bazohamba ibanga elide kwiCAF Champions League uKhama Billiat weKaizer Chiefs, edlulele esigabeni samaqoqo kulo mqhudelwano.
Amakhosi ashaye iPrimeiro do Agosto, yase-Angola ngo 1-0, emlenzeni wesibili weChampions League, ekuhambeni, azibekisela indawo esigabeni samaqoqo okokuqala emlandweni. Igoli leChiefs lishaywe uLeornado Castro, kanti uBilliat ube nesandla esikhulu kulona njengoba konke kuqale kuyena.
IChiefs ijoyine iMamelodi Sundowns esigabeni samaqoqo, futhi uBilliat uyafisa bazibambe ziqine kwiChampions League njengawo amaBrazilians.
“Umuzwa omnandi lona, sifisa ukubonga uMdali ngokusinika leli thuba. Kumele kunconywe ithimba labaqeqeshi neqembu lonke ngamalungiselelo. Wonke umfutho nomdlandla usihlalo awufakayo kuwo wonke umuntu kumele unconywe kakhulu. Kubalulekile ukuthi sizivivinye namanye amaqembu amakhulu adlala kwiChampions League,” kusho uBilliat.
Uthe lo mphumela uzokwenza ukuthi babuyele kwiDStv Premiership behambela phezulu. IChiefs ayiyiqalanga kahle neze imidlalo yeligi nokwenza ukuthi izithole isendaweni ka-13 kwi-log yePremiership.
“Lo mphumela uzosinika ukuzethemba okukhulu njengoba sibuyela emidlalweni yeligi. Sifuna ukuhamba ibanga elide, sifuna ukuziphusha ukuze sibone ukuthi singafika kuphi e-Afrika. Bekungelula neze, bekulikhuni kodwa singafunda kulokhu sibone ukuthi sifika kuphi,” kusho uBilliat.
Uthe abadlali beChiefs abasale eNingizimu Afrika abafana no-Itumeleng Khune, Willard Katsande noLebogang Manyama, bebebagqugquzela kakhulu, bebathumelela ama-SMS bebaqinisa idolo.
“Siyakhuluma nabo emafonini, bayasigqugquzela. Bayingxenye yeqembu futhi ukuseseka abasinika kona kukhulu kakhulu. Kubalulekile ukuthi sibalwele ngoba siyazi ukuthi ukube bekuyibona bebezokwenza okufanayo,” kugcizelela uBilliat.
Mayelane nokuhamba ibanga elide kwiChampions League, ugoqe wathi: “Ngikholwa ukuthi wonke umuntu ufuna ukuhamba aze afike ekugcineni. Sifuna ukuba yisizukulwane esizokwenza lokho okwakhe kwenziwa abadlali abaphambili baleli qembu. Leli qembu linomlando onothile…sifuna ukwenza usihlalo wethu aziqhenye ngathi.”
IChiefs izobhekana neMaritzburg United emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo, eFNB Stadium.
Previous Previous post: UDlangalala weTS Galaxy imnika ithemba eyokushaya amagoli
Next Next post: ICoronavirus igadle kwiChippa ngaphambi komdlalo neSuperSport